Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'ny vatana vaovao ao amin'ny Ernst Mach | Kip Thorne: mpahay fizika mampihetsi-po mandritra ny androm-piainana 2 ary teorista iray mifanelanelana amin'ny vanim-potoana ankehitriny - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Lahatsary UFO an'ny tafika amerikana asongadin'ny fahitalavitra “Tsy fantatra”
Taorian'ny nanamarinan'ny tafika amerikana ny horonantsary UFO nalain'ny mpanamory fiaramanidina mpiady dia nahaliana ahy izany. Ny lahatsoratro voalohany momba ny ET sy UFO dia azo zahana amin'ity pejy manaraka ity:
Fomba fijerin'ny ETs momba ny maha-olombelona
Lavaka mainty, Ernst Mack ary Kip Thorne: Asa iray nitohy tamin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Tsy mpahay fizika aho, dokotera mpitsabo, noho izany tsy manana ambaratonga fanabeazana aho hahafantarana ny lafiny fizika amin'ny dia lavitra interstellar.
Mbola nanandrana ihany aho. Ny sasany nihevitra fa ny fivezivezivezena ety ivelany dia azo atao manamora ny fanamorana izany lavaka mainty.
Mpahay fizika iray malaza amin'ny sehatry ny lavaka mainty Kip Thorne.
Niasa tamin'ny fikarohana momba ny vatana vaovao indray aho nanomboka tamin'ny 1995. Ity fikarohana ity dia mampiseho fa manana talenta sy fahaiza-manao mitovy isika amin'ny androm-piainana iray hafa, ary ny endrika tarehin'ny tarehy dia mety hitohy. Ireo fitsipiky ny reincarnation ireo dia aseho koa amin'ny asan'i Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia.
Kip Thorne amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao an'i Physicalist Ernst Mach
Nihevitra aho fa i Kip Thorne dia tsy maintsy ho mpahay fizika nahavita tamin'ny fiainany taloha. Rehefa nosimbadiko tato an-tsaiko io hevitra io dia nieritreritra aho Ernst Mach, izay hitako avy eo dia manana endrika mitovy amin'ny an'i Kip.
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, ilay fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta, dia nanamafy fa i Kip Thorne dia ny vatana vaovao indray Ernst Mach.
Haingam-pandeha Ernst Mach sy fiaramanidina
Mach dia teraka tamin'ny 1838 tany Austria. Mpahay fizika manan-kery izy izay nanolo-tena ny teôria momba ny fianam-pitiavan'i Einstein.
Fantatra amin'ny famoronana haben'ny sidina supersonic ny habeny, ka ny hafainganan'ny fiaramanidina dia mizara ny hafainganam-pandehan'ny feo. Raha manidina amin'ny indroa noho ny hafainganam-pandehan'ny feo ny fiaramanidina dia tombanana ny manidina amin'ny hafainganana Mach 2.
Maty tamin'ny 1916 i Mach.
Talenta taloha: Kip Thorne manohy ny asan'i Erst Mach
Kip Thorne dia teraka tamin'ny 1940 tany Etazonia. Izy dia manam-pahaizana momba ny fiatraikan'ny astrofizika amin'ny teoria Einstein, ao anatin'izany ny fahazoantsika ny lavaka mainty, ny onjan-gravité ary ny dia interstellar. Thorne dia consultant tamin'ny sarimihetsika Interstellar.
Siansa sy ny teknolojia vatana
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrik'i Ernst Mach sy i Kip Thorne dia tsy mitovy.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Kip Thorne dia manohy ny asan'i Ernst Mach.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Aotrisy i Mach, i Thorne kosa teraka tany Etazonia.
Ny fahafantarana fa afaka manova ny fivavahana sy ny zom-pirenena isika mandritra ny androm-piainana iray mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny fifandonana sy ny ady dia miorina amin'ny tsy fitovizan'ireo marika famantarana ny maha-izy azy.
Tranga iray manandanja amin'ity lafiny ity dia:
Anne Frank | Barbro Karlen Reincarnation case: zazavavy kristiana mahita ny fiainany taloha jiosy